Free fanompoana an-tserasera. Kajy ny spiral tohatra
Calculating ny habe amin'ny spiral tohatra
Ny haavon'ny ny tohatra H
Ny savaivony ny tohatra D1
Inner savaivony D2
Zoro ny nifandimby A
Kajy ny spiral tohatra
H - Ny haavon'ny ny tohatra
D1 - ivelany savaivony
D2 - Inner savaivony
A - zoro ny nifandimby,
Length amin'ny spiral staircases dingana tsy tokony ho latsaky ny 80 cm.
Dingana sakan'ny ao amin'ny foibe anjara tokony ho tsy latsaky ny 20-25 sm any amin'ny faritra mivelatra - tsy mihoatra ny 40 cm. Ny haavon'ny ny dingana iray dia mety ho spiral tohatra lehibe noho ny hahavony ny lalana mankany amin hirotsaka ho. Normal dingana ambony noho ny mitsinkafona heverina 16 sm ny visy - 18 cm.
Amin'ny 'ilay toerana izay mitranga ny tongotra, ny helical dingana tohatra tokony ho ny 25-30 sm teo an-tsisin'ny - farafahakeliny 30-35 cm. Lalina izany no dingana mora. Dia tongotra ny olona ho an-tsehatra tanteraka, tsy mihantona ny sisiny.
Mandraisa andraikitra Dimensions spiral tohatra.
h - ny lavany ny sehatra
W1 - dingana sakan'ny ao amin'ny anjara malalaka
W2 - workpiece sakan'ny sehatra
α - zoro endrika dingana